Safiirka Somalia kenya u fahdiya oo la kulmay wakiilka qaramada midoobay | raascasayrmedia.com
← Qaraxyo ciidamo ka tirsan dowladda KMG Caaw lagula eegay degmada Waaberi.
Madaxweynaha dalka Uganda oo ku baaqay in dagaal lala galo kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka horjeeda Dowladda Soomaaliya →
July 23, 2010 · 8:01 pm
Safiirka Somalia kenya u fahdiya oo la kulmay wakiilka qaramada midoobay
afiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Max’ed Cali Ameeriko ayaa Shabelle u faah faahiyay waxyaabihii looga hadlay kulan maanta Xafiiskiisa uu kula qaaray ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay dhawaan ay u magaacowday Soomaaliya.
Isagoo qadka taleefanka ugu waramayay Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Max’ed Cali Ameeriko ayaa waxaa uu sheegay in Maanta Xafiiskiisa uu ku qaabilay ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Dr. Augustine waxaana uu sheegay in uu kala hadlay arimaha Qaxootiga Soomaaliya ee ku sugan gudaha dalka iyo Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxaa uu sheegay Safiirku in uu u balanq aaday waxyaabo badan oo uu u qabanayo Qaxootiga dalka Soomaaliya ee ku daruufeysan xeryaha Qaxootiga ee dalka Kenya, isagoo intaasi ku daray in uu kmu wargaliyay in dhawaan ay Qaramada Midoobay Caawinaad u sameyn doonto dadkaasi Qaxootiga ah.
Labadaani masuul ayaa waxaa ay sidoo kale ka hadleen xaaladda dalka Soomaaliya iyo kaalinta Qaramada midoobay looga baahanyahay in ay ku caawiso dowladda KMG Soomaaliya, waxaana uu balan qaaday ergeyga ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Sooma.